Yenza amava aMthengi oPhezulu | Martech Zone
Yenza amava aMthengi oPhezulu
NgeCawa, ngoSeptemba 9, 2012 NgeCawa, ngoSeptemba 9, 2012 Douglas Karr
Ngelixa i-Intanethi iqhubeka nokuvela kwaye sele ikho kangangeshumi leminyaka, umhlaba uyayazi kakuhle indlela yokwenza amava omthengi amahle. Ukufana phakathi kwendlela obaphatha ngayo abathengi buqu kunye nendlela obaphatha ngayo kwi-Intanethi ziyafana xa uzama ukwenza elona thuba liphezulu lomthengi.
I-infographic nguMonetateAbathengi balindele unxibelelwano lwe-Intanethi olufanelekileyo kunye neempawu. Kumashishini amaninzi, ukubanakho ukuhambisa amava afanelekileyo kubathengi kubakhenkethi bewebhusayithi yabo kuhlala kungumngeni. Fumanisa ukuba uguqulela njani amava aphuma ngaphandle kwabathengi kwi-intanethi kule infographic.
tags: vavanyoUkujolisa kwindlela yokuziphathageotargetingukuvavanywa kwezinto ezininziekujoliswe kuyoUkujoliswa kwetekhnolojiukufanelekaUkujolisa okujongwa kwimozuluukuqinisekiswa kwewebhusayithiUvavanyo lwewebhusayithi
Yintoni esebenzela uKwabelana ngeNtlalo